Iingcebiso ngokusebenza kunye ne-CSS3 yakho yesitayile | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iingcebiso ngokusebenza kunye ne-CSS3 yakho yesitayile
UFran Marin | | Uyilo lwewebhu, ngokubanzi
Nje ukuba sichaze ubume bewebhusayithi yethu kwaye siphuhlise DOM Ngendlela echanekileyo, kubalulekile ukuba uchaze izimbo ezifanayo, ikwayindawo enobuchule kwaye apho unokwenza ngokwezifiso ngokuthe ngqo kwikona yokugqibela yewebhusayithi yakho. Amashiti esitayile esilahlekileyo sesona sisombululo sisiso, kodwa kubo bonke abo benza i-foray yabo yokuqala kwihlabathi lophuhliso lwewebhu, kukho iingcebiso ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukufezekisa iziphumo ezilungileyo.
Ukufumana isiphumo sobungcali esiqhelekileyo sesiphelo sangaphambili esingcwalisiweyo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo imiba ethile efana noku-odola, ukufundeka kunye nokulungiswa kwezona mpazamo zixhaphakileyo kolu hlobo lokuziqhelanisa. Ndabelana apha ngezantsi iingcebiso ezintlanu esisiseko kakhulu kodwa kwangaxeshanye kubaluleke kakhulu kunyango kunye nokuqwalaselwa ngokukuko kwamaphepha ethu esitayile seCSS.
1 Qinisekisa ukuseka iodolo esebenzayo kunye nolwakhiwo kwii-CSS3 zakho zamaphepha esitayile
2 Khetha amagama acacileyo nacacileyo kubakhethi bakho
3 Ungalibali ukongeza iingcaciso
4 Soloko usebenzisa ukuseta kwakhona kumaphepha akho esitayile
5 Khetha esona sixhobo sisebenzayo
Qinisekisa ukuseka iodolo esebenzayo kunye nolwakhiwo kwii-CSS3 zakho zamaphepha esitayile
Ndihlala ndihlulahlula istayile sam ngokulandelelana. Indawo yokuqala ndihlala ndisebenzisa abakhethi ngokubanzi kwaye ke ndongeza ukongeza izibhengezo ze-html kwaye ekugqibeleni ndiye emsebenzini ngaphakathi kwe-id yezikhongozeli kunye nezinto ezincinci. Ngokusisiseko iphantsi landela ingcinga ye-DOM kwaye ukuqala kubazali ukuphela nabantwana. Nangona kunjalo sinokulandela enye ifomula okanye iodolo, umzekelo sinokubeka iqela kubakhethi kunye nezibhengezo kuthathelwa ingqalelo umsebenzi wabo. Yonke into iya kuxhomekeka ekubeni zeziphi izinto esizithandayo kunye nendlela esiziva sikhululeke ngayo xa sisebenza.
Khetha amagama acacileyo nacacileyo kubakhethi bakho
Kukho into ebaluleke kakhulu ekufuneka uyithathele ingqalelo, kwaye loo nto kukuba i-CSS3 yahlukile ekusebenziseni oonobumba abakhulu nabancinci, ke ukubhala igama ngonobumba omkhulu kunokuthetha into eyahlukileyo kwaye kunokubangela iimpazamo. Eyona nto ilula kukusoloko usebenzisa oonobumba abancinci ukuthintela olu hlobo lwengxaki. Zama kwakhona khetha amagama eeklasi zakho kunye nee-ID zakho ezibonakalayo ngokucacileyo kwaye azisenzi ukuba sibe namathandabuzo okanye iimpazamo.
Ungalibali ukongeza iingcaciso
Ngokuqinisekileyo kufuneka wabelane ngeefayile zakho nabanye abantu, mhlawumbi umxhasi wakho okanye abantu osebenza nabo kwiqela lakho lomsebenzi njengoyilo loyilo, abanye abayili okanye abaphuhlisi. Ngesi sizathu kubaluleke kakhulu ukuba sinike ingqalelo ubume kunye nokuqinisekisa ukucoceka nokucoceka kokugqiba. Amagqabantshintshi acacisayo aya kunceda nabani na ongena kwiphepha lethu lesitayile ukuba ngokukhawuleza afumane indlela ajikeleze ngayo. Naluphi na uhlobo lokujonga ekufuneka luthathelwe ingqalelo kufuneka ibonakale njengomxholo. Khumbula ukuba ungabandakanya umxholo kokubini kwifayile yakho ye-Html nakwifayile yakho yeCSS kwaye kuzo zombini iimeko zizimvo ezingazukuboniswa ngokufanelekileyo kwisiphumo sokugqibela kwaye ziya kubonakala kuphela xa ikhowudi yemvelaphi efanayo ifikelelwe ukuze inokuba luncedo kakhulu.
Soloko usebenzisa ukuseta kwakhona kumaphepha akho esitayile
Isikhangeli ngasinye sinephepha lalo elingagqibekanga, ukuze kuthintelwe naziphi na iimpazamo okanye utshintsho kuxhomekeke kwisikhangeli ekujongwa kulo iphepha lethu, kuluncedo kwaye kuyacetyiswa ukuba setha kwakhona iishiti zakho. Kukho iindlela ezizezinye.Iphepha lesitayile sika-Eric Meyer linokuba lolona khetho luhle kakhulu.
Khetha esona sixhobo sisebenzayo
Zininzi izixhobo onokuzisebenzisa ukuze usebenze kakuhle xa usebenza kuyilo lwewebhusayithi yakho. Ukusukela ekudalweni kweefowuni zentsimbi ekuphuhliseni ubume bewebhusayithi yakho, kunye nazo zonke iintlobo zezicelo kubandakanya I-Adobe Photoshop, i-Illustrator okanye iFireworks. Kananjalo unabahleli abaninzi abaziingcali ukuba yenye yezona zicetyiswayo (ubuncinci endizisebenzisayo) Umbhalo ophantsi okanye, ukusilela oko, iAdobe Dreamweaver kuba zibonelela ngokuhlangana okulula kakhulu ngamanqanaba aphezulu obuntu kunye nethuba lokusebenza neekhowudi zethu ngenkqubo yeendlela ezimfutshane kunye nenkqubo yokugcwalisa ngokuzenzekelayo eya kuthi isincede sigcine ngaphezulu kwe-70% yexesha esiza kulisebenzisa nomhleli yombhalo ocacileyo wendabuko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Iingcebiso ngokusebenza kunye ne-CSS3 yakho yesitayile
UMarga Sanchez sitsho
Enkosi ngengcebiso, ndinomdla kuyilo kwaye zonke iingcebiso zamkelwe kakuhle. Qhubeka uhamba.
Phendula uMarga Sanchez
Umzobo ka "Hunt Day" kaHunt
Umkroli uMateyu Simmonds ubaza ubugcisa bangaphakathi kwiibhloko ezincinci zemabhile kunye namatye